CIN Khabar बालबालिका कस्तो वातावरणमा पढ्न चाहन्छन् ?
बालबालिका कस्तो वातावरणमा पढ्न चाहन्छन् ? शिक्षाविद भन्छन्–आफ्नो व्यवहारको बारेमा पनि विद्यार्थीलाइ सोध्नुपर्छ
शोबिता रिसाल सोमबार, असार २, २०७६, १२:३३:००
मकवानपुर खोलाघाटका मिलन लामा ९ कक्षामा पढ्नुहुन्छ । उहाँलाइ नयाँ कुरा जान्न र जानेका कुरा साथीहरूलाई सुनाउन मन पर्छ । शिक्षकहरुले साथी जस्तै व्यवहार गरेको र विद्यालयको वातावरण सफा अनि हरियाली भएको उहाँलाइ मन पर्छ । स्कूलको धारामा पानी आवस्, वरिपरि हरियाली होस्, टिफिन छुट्टिमा छाहरीमा बसेर खाजा खान पाइयोस् जस्तो उहाँलाइ लाग्छ ।
रिजन वाइवा कक्षा ८ मा पढ्नुहुन्छ । कक्षाकोठा, खेल्ने मैदान अनि चर्पी होस्, स्कुलमा नै सफा पानीको धारा होस्, स्कूल वरिपरि बोट विरुवा भएको पनि उहाँलाई मन पर्छ । मुख्य कुरा शिक्षकले गर्ने व्यवहार राम्रोहोस् भन्ने लाग्छ । कहिलेकाँही शिक्षकहरुले फरक व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ, शिक्षकको व्यवहार मायालु र एकनासको भए स्कूलमा रमाइलो लाग्छ, रिजन भन्नुहुन्छ ।
गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मको बालबालिकाको उमेर सबैभन्दा धेरै संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो बेलामा उनीहरूलाई सामग्रीको प्रयोग, खोज तथा अन्वेषण र ज्ञानेन्द्रीयहरूको प्रयोग गर्दै सिकाउनु प्रभावपकारी मानिन्छ । गृहकार्यको नियमित जाँच, पुस्तकालय,खेलकुद सामग्रीको उपयुक्त व्यवस्थापन पनि बालबालिकोको ध्यान तन्ने उपाय हुन्छन् ।
बालबालिकाको मस्तिष्क र स्नायुको एक अध्ययनअनुसार पहिलो ३ वर्षमा अति नै तीब्र गतिमा उनीहरूको मस्तिष्कको विकास हुन्छ । बालबालिकाको ५ वर्षमा दिमागको ९० प्रतिशत विकास भइसक्छ । पिउने पानी र सरसफाइको आधारभूत कुरा पनि पूरा गराउनुपर्नेमा अचेल जोड लिन थालिएको छ । कक्षा ८ मा अध्यनरत कविता लामालाइ स्कूलको वातावरण सफा भए मात्रै स्कूल जान मनपर्छ, वातावरण नै फोहोर छ, चर्पी छैन, धारामा पानी छैन, प्याडको व्यवस्था छैन, फोहोर फाल्नलाइ डस्बिन छैन, केही छैन अनि महिनावारी हुँदा स्कूल जान मन लाग्दैन उहाँले भन्नुभयो ।
देशभरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गरी झण्डै ७२ लाख विद्यार्थी पढीरहेका छन् । आफ्ना सन्तानको पढाईप्रति हरेक अभिभावकको चासो हुन्छ । बालबालिकाले कक्षा छोडेको विषयमा हरेक वर्ष चर्चा हुन्छ तर विद्यालयको वातावरणको बारेमा खासै छलफल सुनिँदैन । बालबालिकाले पढ्ने वातावरण कस्तो चाहन्छन् ?
विद्यार्थीको भावना वुझेर उनीहरुलाई विद्यालयमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीलाइ आकर्षण गर्न विद्यालयको वातावरण त छदैछ, संगसंगै शिक्षकको व्यवहार र पढाउने शैलिले पनि धेरै अर्थ राख्छ । शिक्षकहरु सिधै पाठ पढाइहाल्न भन्दा पनि गाउँ, घरका सन्दर्भ, उनीहरुलाइ राम्रो लाग्ने बिषय, नराम्रो लाग्ने बिषयलाइ जोड्दै पढाउन सकियो भने मात्रै विद्यार्थीहरु पढाइ र स्कूलप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
अनि कहिलेकाँही शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुसंग आफूले पढाएको बुझे नबुझेको, आफ्नो व्यवहार चित्त बुझे नबुझेको तथा विद्यालयको वातावरणको बारेमा पनि सोधीरहनुपर्छ । कोइराला भन्नुहुन्छ, विद्यालयमा मात्रै होइन घरमा पनि अभिभावकले आफ्ना छोरा, छोरीलाइ विद्यालयको बारेमा सोधी, खोजी गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २, २०७६, १२:३३:००
लगातारको वर्षाका कारण देशभरिको जनजीवन प्रभावित भएको छ । देशैभर लगातार आएको पानीले जनजीवन प्रभावित भएको छ । पहाडमा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको । देशभरि अहिले पानी परिरहेको छ । २३ घण्टा